အပေးအယူသဘောရဲ့ အနောက်မှာ နွေဦးဟာ မဝေးတော့ပါဘူးး(အချိန်တိုတိုနဲ့ အောင်ပွဲဆင်တော့မယ်) – Sport Gaber
အပေးအယူသဘောရဲ့ အနောက်မှာ နွေဦးဟာ မဝေးတော့ပါဘူးး(အချိန်တိုတိုနဲ့ အောင်ပွဲဆင်တော့မယ်)
NUG က ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမယ် ရိုဟင်ဂျာအရေးက ဘယ်လောက်အထိ sensitive ဖြစ်သလဲဆိုတာ မြန်မာပြည်သားတိုင်း သိကြပါတယ် ဆတ်ဆတ်ထိမခံအောင်လည်း စစ်တပ်က မှိုင်းသွင်းခဲ့တယ်
၂၀၁၆ အောက်တိုဘာမှာ ဒီအကွက်ကို စစ်တပ်က စရွှေ့တယ် ဇန်န္တဝါရီ ၂၀၁၇ မှာ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှု့တွေနဲ့အတူ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်္ဂလားဘက်ကို ထွက်ပြေးကြရတယ် ဒီအရေးအခင်းကို မြန်မာပြည်သားအများစုက စစ်တပ်ဘက်မှာ ရှိခဲ့ကြတယ် စစ်တပ်ကလည်း ဒီဂွင်ကို သေချာဆင်ခဲ့တာပါ
ဒီအချိန်မှာ စစ်တပ်ဘက်က ကြိူတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း အမျိူးဘာသာ၊သာသနာ အဖွဲ့တွေ လှုပ်ရှားခိုင်းတယ်”ဘာသာပျောက်သွားမယ် “လူမျိူးပျောက်သွားမယ်” တိုင်းပြည်ပျောက်သွားမယ်” ဆိုတာတွေနဲ့အတူ ဦးဝီရသူတို့လို အစွန်းရောက် မျိူးချစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
သူတို့ဖြစ်ချင်တာက ပြည်တွင်း မွတ်စလင်တွေပါ ဝင်ပါလာပြီး ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးတာပါ သို့ပေမယ့် ၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးနဲ့ ပြည်တွင်း မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက ဆင်ထားတဲ့ဂွင်ကို မတိုးမိအောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတယ်
သို့ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာ အများစုကတော့ ပြန်လမ်းမရှိခဲ့ကြဘူး ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်နဲ့ ကော့ဘဇားခရိုင်မှာ နေကြရတယ်။အခုတော့ ကုလအစီအမံနဲ့ ဘင်္ဂလားပိုင် ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာ သီးသန့်ထားတယ်။လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအပေါ်မှာ အစာမကြေဘူး။
အိုအိုင်စီနိုင်ငံတွေလည်း အတူတူပါပဲ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အိုအိုင်စီနိုင်ငံတွေက မြန်မာကို စစ်မပြုခဲ့တာပဲ ကံကောင်းတယ်မှတ်ရမှာပါ။အမေစုတက်လာတော့ ဒီပြဿနာက စောင့်ကြိုနေတယ် စစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့အကွက်က ဒီပြဿနာကို NLD က တာဝန်မယူနိုင်ပဲ ဒုက္ခတွေ့အောင်လို့ပါ။
အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆန်ရှင်တွေနဲ့၊ပြင်တွင်းငြိမ်သက်မှု့မရှိပဲ၊အကြောင်းပြပြီး အာဏာသိမ်းလို့ရအောင် စီစဉ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့
သို့ပေမယ့် ထိလွယ် ရှလွယ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အမေစုက နယ်သာလန်အထိသွားပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ် အမှု့ဟာ အပြီးသတ် အနိုင်မရခဲ့ပေမယ့် အနိုင်ရလုနီးနီးအထိ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးကို NLD ခေတ်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေက သိပ်မပြောကြတော့ဘူး။အမေစုကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ အာဏာသိမ်းမှု့မှာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂကို အားကိုးလာရတယ်။ကုလအကူအညီကို မျှော်လင့်လာရတယ် R2P တောင်းဆိုကြတယ် တကယ်တော့ R2P က 2017 မှာကတည်းက မြန်မာပြည်ကိုဝင်ဖို့ နိုင်ငံအများစုက တောင်းဆိုနေတာပါ။
ဒီအချိန်တုန်းကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများစုဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ နိုင်ငံကြီးအချို့က ကန့်ကွက်သူရှိသလို ကြားနေပေးခဲ့ကြတယ်။အာဆီယံရဲ့ သဘောထားကတော့ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသအတွင်းမှာ ကုလတပ်တွေ ခြေရှုပ်လာမှာကို လက်ခံချင်ပုံမရပါဘူး ဒါဟာ ၂၀၁၇ ရိုဟင်ဂျာအရေးအခင်းကတည်းက သူတို့ရဲ့သဘောထားပါ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။
ထားတော့…။ ထိလွယ် ရှလွယ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို NUG က ဖြေရှင်းလိုက်တယ်။ဘာသာပျောက်မလား …? လူမျိူးပျောက်မလား …? နိုင်ငံပျောက်မလား …? ဆိုသူတွေကို ပြောချင်ပါတယ် ။
” ဘာမှ မပျောက်ပါဘူး ” ဘာသာရေးလုပ်စားတွေက ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ မှိုင်းသွင်းခဲ့တာပါ( ဓမ္မဘက်မှာ ရည်တည်နေတဲ့ ဘုရားသားတော်များ မပါ )
ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ စစ်အာဏာသိမ်းမှု့ဟာ လူတစ်စုကောင်းစားရေး စစ်အာဏာဝါဒနဲ့ တရုပ်ရဲ့ သွယ်ဝိုက် ကိုလိုနီဝါဒဆီကို ဦးတည်နေတာပါ စစ်ကောင်စီအနိုင်ရခဲ့ရင် ဘုရင်ဆိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဘုရင်စနစ်ထက်ကို ဆိုးဝါးပါလိမ့်မယ် နဝတခေတ်လို အခြေအနေတောင် မရနိုင်တော့ပါဘူး သေချာပေါက် တိုင်းပြည်ပျောက်မှာပါ
ဒါကိုသိနေတဲ့ NUG ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို လိုက်လျောပေးလိုက်တယ် ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားပေးတာဟာ ” ချောက်ထဲကျလုနီးနီး တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်လိုက်တာပါပဲ”ဒီအတွက် NUG ဟာ ကုလနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု့ အကူအညီကို ရလာမှာပါ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို နှစ်စဉ်ဝင်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ ပါလက်စတိုင်း၊ဆီးရီးယားနဲ့ ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားတွေပါ။အားလုံးနီးပါးက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပါပဲ။
” ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အများစုနေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဘာ့ကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ခေါ်သွင်းရသလဲဆိုရင် …? ”
ဒုက္ခရောက်နေသူတွေမို့ပါ။လူသားချင်း စာနာလို့ပါ “ဒီ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဒုက္ခသည်တွေက အမေရိကမှာ ဒုက္ခပေးနိုင်သလား …? ပြည်နယ်တစ်ခု သီးသန့်ထောင်လေမလား …? ဆိုရင်တော့ မပေးနိုင်ပါဘူး
ဘာ့ကြောင့် ပြဿနာ မရှာနိုင်သလဲဆိုရင်
“ခိုင်မာတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ တိကျတဲ့ ဥပဒေ ရှိလို့ပါ ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း၊ တစ်နေရာတည်း နေရာမပေးပါဘူး။ပြည်နယ်အနှံ့ကို နေရာချပေးပါတယ် စစ်အာဏာသိမ်းမှု့မှာ အများစုက စစ်တပ်ကိုသာ မဲနေကြပါတယ် ဥပဒေကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။
မိုးထိ ရွှေသူဋ္ဌေးကို ထိုင်းရဲကဖမ်းပြီး မြန်မာဘက်ကို ပို့ပေးတော့ ထီးမိုးပြီး ကြိုတာဟာ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်ပါ ငါတို့လုပ်တယ် ၊ မင်းတို့ဘာပြောမလဲဆိုတဲ့ အထာပါ ဒါဟာ တိကျမှု့မရှိတဲ့ ဥပဒေဆိုတာ အထင်အရှား ပေါ်လွင်စေပါတယ်
ဦးကိုနီအရေး ၊ ဗစ်တိုးရီးယားအရေး ၊ ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု့ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်ကနေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ ဒါကို တာဝန်ယူမှု့ရှိတဲ့ NUG က တာဝန်ယူလိုက်တယ်
ဒီအတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ ပိုပြီးတော့ ပီပြင်လာတယ် ဘယ်လောက် အောင်မြင်နေသလဲဆိုရင် အမေရိကန်နဲ့ အီးယူက NUG ကို ကူညီတော့မယ်အသေးစိတ်တော့ ပြောလို့မရသေးဘူး အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ အပေးအယူသဘောကိုတော့ နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် အချို့ကတော့
“ဘယ်သူ့မှ အားမကိုးဘူး…ဂျီ-ဇက် တွေရှိတယ် တို့ပြည်သူတွေ ညီတယ်…တူမီးနဲ့တောင် သူတို့ရှုံးနေပြီ…ယူအန်လည်း အားမကိုးဘူး အမေရိကန်လည်း အားမကိုးဘူး “ဆိုသလို ပြောနေကြပါတယ်
စာရေးသူရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကတော့ နည်းနည်းလေး စပ်မယ်ထင်ပါတယ်။စစ်သတင်းတွေ လေ့လာပြီး၊စစ်ရေးသုံးသပ်မှု့တွေ ရေးနေသူမို့ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောပြပါ့မယ်။
မခံမရပ်နိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ မိုလိုတော့ဗ်၊တူမီး၊လေသေနတ်တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီကို ရင်ဆိုင်တာဟာ သိပ်ကိုပြင်းပြတဲ့ တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ပါ တနည်းပြောရရင် စစ်ကျွန်၊တရုပ်ကျွန် အဖြစ်မခံနိုင်လို့ပါ ဒီလိုလက်နက်နဲ့တိုက်တဲ့အခါ
( ၁ ) ပြည်သူဘက်မှာလည်း အကျအရှုံးရှိပါတယ်
( ၂ ) ဘတပြန် ကျားတပြန် ရေရှည်ပြည်တွင်းစစ်ဆီကို ဦးတည်ပါမယ်
( ၃ ) လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေတဲ့ ဒေသတွေမှာ အဖိခံရပါမယ်
( ၄ ) နောက်ကွယ်ကနေ စစ်ကောင်စီနဲ့ လက်ဝါးရိုက် ဆက်ဆံသူတွေ များလာပါမယ်
( ၄ ) မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကို ပြည်သူတွေ ကြူံတွေ့ရပါမယ်
( ၅ ) ကျမ်းမာရေး ၊ ပညာရေး ကဏ္ဍအစုံမှာ နိမ့်ကျလာပါမယ်
မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကြိူးပမ်းစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့တယ် ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့တာဟာ မြန်မာ့တပ်မတော် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလည်း လူအား၊ငွေအားနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။
စာရေးသူတို့ငယ်ငယ်၊၈၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကို မှီခဲ့သူတွေ တွေ့ဘူးကြမှာပါ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး ခြံစည်းရိုးတွေကို အဝိုင်းအပေါက်လေးတွေပါတဲ့ သံပြားထူထူကြီးတွေကို ကန့်လန့်ဖြတ် ကာထားတာမျိူးပါ။သံပြားထူထူကြီးက အလျား ၁၂ ပေ ၊ အနံ ၂ပေလောက် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်
ဒီသံပြားကြီးတွေကို အမေရိကန်စစ်တပ်က မြန်မာစစ်မြေပြင်မှာ အသုံးပြုဖို့ သင်္ဘောတွေနဲ့ အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပို့ခဲ့ရပါတယ် တံတားထိုးဖို့နဲ့ ရွှံ့တောတွေထဲမှာ စစ်သားတွေ စစ်ကားတွေ၊တင့်ကားတွေသွားဖို့ ယာယီအသုံးပြုတာပါ။စစ်ပြီသွားတော့ ပြန်မယူပါဘူး။မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူတို့ငယ်ငယ်က စစ်တပ်ထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ကားတွေက အမေရိကန်ကားအများစုပါ CARGO လို့ခေါ်တဲ့ စစ်ထရပ်ကားကြီးတွေ ၊ ဖော့ဒ် ၊ ဂျီအမ်စီ ၊ ဒေါဂ်ျ့ ၊ ချက်ဗလက် ကားကြီးတွေဟာ အမေရိကန်စစ်တပ်က မြန်မာစစ်မြေပြင်အတွက် သယ်လာတဲ့ စစ်သုံးထရပ်ကားတွေပါ။
သင်္ကြန်မှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ဝီလီဂျစ်(ဂျစ်ကား ယ)တွေဟာလည်း အမေရိကန်တွေ သယ်လာတာပါပဲ စစ်ပြီးတော့ ပြန်မယူသွားပါဘူး မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက်ထားခဲ့တာ အရပ်သုံးတွေတောင် အများကြီးတွေ့ရမှာပါ
လွတ်လပ်ရေး အဆုံးသတ်ကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဗြိတိသျှဆီကနေ ရခဲ့တယ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ မြန်မာအစိုးရက အမေရိကန်၊ဗြိတိသျှနဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကို အသိအမှတ်မပြုတော့ပါဘူး ရုရှားနဲ့ ပုးပေါင်းပြီး ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန် ဖြစ်လာတယ်။မဆလခေတ်မှာတော့ အမေရိကန်ကို ရန်သူသဖွယ် မှိုင်းတိုက်ပါသေးတယ်။
ဒါကိုသိထားတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ NUG ကို လွယ်လွယ်နဲ့တော့ မကူညီပါဘူး။NUG ဟာ ဘယ်လိုအစိုးရလည်းဆိုတာ သွေးတိုးစမ်းပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ NUG ဟာ အနောက်အုပ်စုက အစာမကြေဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံလိုက်တယ်။
မြန်မာဟာ အစွန်းရောက်မျိူးချစ်စိတ် အစွန်းရောက် ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ ရှေ့မဆက်တော့ဘူးဆိုတာ အသိပေးလိုက်တာပါ။ဒီအတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ အချိန်တိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရရာလက်နက်နဲ့ တော်လှန်နေတဲ့ မျိူးချစ်သူရဲကောင်း အာဇာနည်တွေရဲ့အသက်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ကို အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေနဲ့ နည်းပညာသုံး စစ်သုံးပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် စစ်ကျွန်၊တရုပ်ကျွန်ဘဝမရောက်အောင် NUG လှမ်းလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းကို မှန်းဆနိုင်ကြမှာပါ သေချာတာကတော့ …….နွေဦးဟာ မဝေးတော့ပါဘူး။
Previous Article အမေရိကန်ကို ရောက်လာခဲ့ပုံကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အိပန်ဆယ်လို
Next Article မြင်းခြံမှာ အမှတ်၁၉ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပစ်ခတ်ခံရ၊ အမှတ်၈ ရပ်ကွက်မှာလည်း ပစ်ခတ်မှုအချို့ရှိ